Kacdoonka diirran ee jaakadaha rookaha ruxmaya | Ragga Stylish
Shan jaakad oo xiirto jiilaalkan
Jaakadaha rookaha ah ee dhogorta leh ayaa noo oggolaanaya inaan sii wadno ku raaxeysiga noocan ah jaakad inta lagu jiro bilaha qabow. Waana taas moodooyinka dhaqameed ma bixin karaan difaac ku filan dabaysha.
Haddii jiilaalkan aadan rabin inaad ka tanaasusho lahjada caasiga ah ee jaakadaha rookaha, kuwan soo socdaa waa moodooyinka aan kugu dhiirigelinayno inaad tixgeliso:
1 Jaakad bushkuleeti leh xiirid faux ah oo dhib badan
2 Jaakad rookaha bunni leh xiirid
3 Jaakada rookaha ah ee dhogorta xiiraya
4 Jaakada rookaha xiirida badan
5 Jaakada rookaha xiiranaya
Jaakad bushkuleeti leh xiirid faux ah oo dhib badan
Silsiladda iswiidhishka ah waxay bixisaa jaakadan maqaarka faux leh oo saameyn duug ah leh. Thanks to shearling-ka madow, waxay haysaa gariirka jaakadaha dhaqameed ee rookaha ku dhow dhow. Sababtaas awgeed sidoo kale waa tusaale in lagu xisaabtamo. Haddii aad rabto jaakad mooto ah oo shearling taas oo qaybtani aysan ahayn diiradda dareenka.
Jaakad rookaha bunni leh xiirid
Zara ayaa ku sharraxday mid ka mid ah midabada moodada ah xilli ciyaareedkan: todobaatameeyadii bunni. Si la mid ah sida ay ugu dhacdo H&M, waxaa ka mid ah xiirid muuqata oo qoorta ah, xirmooyinka iyo dhexda.
Jaakada rookaha ah ee dhogorta xiiraya
Mr Porter, 1.150 XNUMX
Dhiiranaanta ayaa mas'uul ka ah shirkadda CMMN SWDN oo leh jaakaddan baaskiillaha leh a miridhku midabkiisu midabkiisu badan yahay midab badan. Maaddaama ay tahay mid laga saari karo, waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu sii wado isticmaalka guga, wax aad muhiim u ah.
Jaakada rookaha xiirida badan
Mr Porter, 2.690 XNUMX
Qodobka farqiga u ah nooca 'Marc Jacobs' ayaa ah qayb yar oo ka weyn. Naqshadeeyaha Mareykanku wuxuu u keenaa jaakad casri ah jaakaddan caadiga ah adoo ku daraya garbaha hoos u dhacay iyo meel yar oo dheeri ah oo u dhaxeysa jirka iyo marada sidii caadiga ahayd dharkan.
Jaakada rookaha xiiranaya
Mr Porter, 5.990 XNUMX
Brunello Cucinelli wuxuu sharad ku galay a jaakad baaskiil bunni ah oo naqshadeedu u muuqato nadaafaddeeda. Moodel lagu xisaabtamo haddii aad rabto gabal in, sida ugu macquulsan, uu yahay mid rasmi ah intii suurtagal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Shan jaakad oo xiirto jiilaalkan
Saddexda surwaal ee aad u baahan tahay xilligan fasaxa ah